मूल्य समायोजनपछि लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि यो कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ३७६.२६ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो कम्पनीको प्रतिकित्ता ४१२ रुपैयाँ थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार यो...
मूल्य समायोजनपछि किसान लघुवित्तको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) बोनस सेयरका लागि किसान लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता १००८.३३ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो लघुवित्तको प्रतिकित्ता १२१० रुपैयाँ थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार यो लघुवित्तको...
मूल्य समायोजनपछि विन नेपाल लघुवित्तको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बोनस सेयरका लागि विन नेपाल लघुवित्तको सेयरमूल्यमा समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ९८७.८३ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता १०८० रुपैयाँ रहेको थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार यो लघुवित्तको सेयर...
मूल्य समायोजनपछि नेपाल इन्स्योरेन्सको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) बोनस सेयरका लागि नेपाल इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ५३१.५३ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो कम्पनीको प्रतिकित्ता ५९० रुपैयाँ रहेको थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार यो कम्पनीको...
मूल्य समायोजनपछि नेपाल फाइनान्सको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । हकप्रद सेयर निष्कासन प्रयोजनार्थ नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले सेयरमूल्य समायोजन गर्दै नेपाल फाइनान्सको प्रतिकित्ता ३११.१८ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो कम्पनीको प्रतिकित्ता ४५९ रुपैयाँ रहेको थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार नै यो...
मूल्य समायोजनपछि सगरमाथा इन्स्योरेन्सको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बोनस सेयरका लागि मूल्य समायोजन गर्दै सगरमाथा इन्स्योरेन्सको प्रतिकित्ता १०७९.१७ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता १२९५ रुपैयाँ रहेको थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार नै यो कम्पनीको सेयर...
मूल्य समायोजनपछि एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले बोनस सेयरका लागि एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ५४४.३४ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो कम्पनीको प्रतिकित्ता ५७७ रुपैयाँ कायम भएको थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार...
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि नेप्सेले प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ६०२.८० रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो कम्पनीको प्रतिकित्ता ६४५ रुपैयाँ कायम भएको थियो। अब समायोजित...
मूल्य समायोजनपछि नयाँ सारथी लघुवित्तको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि नेप्सेले नयाँ सारथी लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता १०७४.१२ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो लघुवित्त प्रतिकित्ता १२७८.२० रुपैयाँ रहेको थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार...
काठमाण्डौ । बोनस सेयरका लागि प्रभु इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र आरम्भ चौतारी लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता प्रभुको ७४३.२४ रुपैयाँ, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको ८९१.३० रुपैयाँ र आरम्भ चौतारीको १११६.८६ रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार...
मूल्य समायोजनपछि एसटीसीको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (एसटीसी) को सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेप्सेले गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि साल्ट ट्रेडिङको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ४६८३.६४ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो कम्पनीको प्रतिकित्ता ५१५२ रुपैयाँ कायम भएको थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार यो...
मूल्य समायोजनपछि नेपाल टेलिकम र जीवन विकास लघुवित्तको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) र जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि यी दुवै कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता नेपाल टेलिकमको १२२०.८३ रुपैयाँ र जीवन विकास लघुवित्तको ३०००...
मूल्य समायोजनपछि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । बोनस सेयर प्रयोजनार्थ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सेयरमूल्य समायोजन गर्दै नेपाल लाइफको प्रतिकित्ता १०८५.०९ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता १२३७ रुपैयाँ थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार नै यो कम्पनीको सेयर कारोबारमा...
मूल्य समायोजनपछि गरिमा विकास बैंक र एनएलजी इन्स्योरेन्सको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले बोनस सेयरका लागि गरिमा विकास बैंक र एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले मूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता गरिमा विकास बैंकको ४८१.०३ रुपैयाँ र एनएलजी इन्स्योरेन्सको ७९९.०९ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता गरिमाको ५५८...